Imali yasebhange | Ezezimali Zomnotho
Imininingwane nemibono kokukhulu Imali efakwa ebhange Kusuka emakethe. Thola zonke izindaba ezimayelana nemakethe yediphozi, imikhiqizo emisha, imibandela, yonke imithethonqubo nezinye izihloko eziningi onentshisekelo kuzo. I- amadiphozithi ingenye yezindlela ezivame kakhulu khiqiza inzalo nenhlokodolobha igciniwe.
Njengamanje, amabhange ahlinzeka ngenani elikhulu lemali engenayo engaguquguquki noma eguquguqukayo, ngakho-ke kubalulekile ukwaziswa kahle ukuthi ngaso sonke isikhathi sikhetha umkhiqizo olungele thina ngaso sonke isikhathi.
Yini idiphozi yasebhange
Por UClaudi Casal kwenza Izinyanga ze-7 .
Yize iqiniso lokuthi imali yasebhange yaziwa kahle, bambalwa abantu abaziyo ukuthi bahilelani ngempela. Ukucacisa ...
Amasu wokuthuthukisa ukusebenza kokufakwa
Enye yezindlela zokuzinzisa ukonga abantu abangafuni ukutshala izimakethe zemali engenayo ...
Kusenenkolelo engxenyeni enhle yabasindisi ukuthi imikhiqizo ehloselwe ukutshalwa kwezimali kanye ...
Ebhekene nokwehla okubonakalayo ezimakethe zamazwe zamasheya, enye yezinketho zokonga ngqo ...
Umhlangano wenyanga kaMashi yi-European Central Bank (ECB) uveze ukuthi yini ...
Lesi sigaba semikhiqizo yokonga, imali yesikhathi eside, singafakwa enkontilekeni isikhathi esilinganiselwe ...
Yini amadiphozithi ahlelekile?
Por UJose recio kwenza iminyaka 4 .
Uma okucabangayo ukuthi amadiphozithi ahlelekile afana nalawo wendabuko owawenawo kuze kube yilezi eziqondile ...
Enye yezinkinga ezinkulu ezithintekayo ekuqashweni kwediphozithi yasebhange iqiniso lokuthi zingatholwa ...
Ngokuya ngemininingwane yakamuva evela eBhange LaseSpain, inzuzo ejwayelekile yamadiphozithi asebhange iqhubekile nokwehla ngesikhathi ...
Por USusana Maria Urbano Mateos kwenza iminyaka 5 .
I-facto deposit Lolu hlobo lwediphozi lungenye yamadiphozithi akhanga kakhulu emakethe futhi ...
Yini eletha imali eku-inthanethi?
Por UJose recio kwenza iminyaka 6 .
Okunye okuhehayo kokuthola izinkokhelo ezifakwa ku-inthanethi ukuthi amadiphozi ajwayelekile awenzi imbuyiselo egculisayo ...